Semalt Inogoverana Nhungamiro Kunze Kusava Nehanyo Zvayo kubva kuGoogle Analytics
Kunze kwekutora webhusaiti kubva kune kutumira spam nemamwe marudzi e spam, Google inokurudzira kubviswa kwemukati migwagwa mukugadzirwa nekugadzirwa kwewebsite. Pane chikonzero nei vatenzi vachifanira kuchengeta izvi. Pane mungozi yekukanganisa ruzivo ruri mumigumisiro yeGoogle Analytics. Kana munhu akasika tsvakurudzo paGoogle nenzira dzekuti munhu angazviparadzanisa sei kubva kumigwagwa inodzoka, pane mukana wekuti vachawana plethora yemhinduro - grain bridge.
Zvisinei, kuongorora nzira dzose, dzakataurwa naIvan Konovalov, nyanzvi kubva kune Semalt , inogona kuitika kune imwe yenzira mbiri dzinotevera.
Mhinduro dzekusabvisa kushanya kuno:
Kuumba firimu muGoogle Analytics kuti irege kubvisa kero yePI kubva kumitambo yese yemigwagwa.
Kuumba peji ine cheki inoisanidza kubva kune mamwe mawebvu eGoogle Analytics anokwakuka.
Zvigadziriswa sezvinoratidzwa pamusoro apa zvakanyanyisa maonero angu. Chokutanga pane zvose, hapana madiresi eI IP sezvavanenge vakagadzirirwa kuchinja. Icho chinhu chinowanzoshandiswa kuIPs kuchinja maIndaneti yevanyori vavo. Kusiyana nemafungiro anozivikanwa, vanogona kuita kudaro kakawanda kupfuura imwe yaanofungidzira..Mukuwedzera kune izvi, kupararira kwezvigadzirwa zvekushandisa kune internet zvakagoneka kuti vashandisi vauye nehutachiona hwewebhu kubva kune chero nzvimbo. Saka, zvinoreva kuti kuedza kuchengetedza runyoro rwevose IP mazita ekuwana nzvimbo kunenge iri dambudziko rekusangana.
Nzira yeCokie ndeyechokwadi kushanda. Kunyange zvakadaro, zvinotyisa kugadzira nekuchengetedza peji yakagadzirirwa kuisa cookie. Uyezve, kuongorora kana cookie inoshanda kana kana iri pane iri basa rakaoma kugumisa. Kana munhu asingakwanisi kunyatsoona kuti vashandisi vavo chekuvhara chii zvingareva kuti ivo vanofanira kugadzira cookie itsva nguva dzose pavanenge vachiedza kuwana nzvimbo iyo, iyo maonero angu, inonetsa.
kusina Localhost Traffic
Kana mumwe achiitisa webhupu yekuongorora pane imwe nzvimbo yevhareji, zvinongonzwisisika kuti haudi kuti kushanyira uku kunyore sevashanyi. Saka, mumwe munhu anofanira kusanangura mutengesi uyu wakagadzirwa. Mumwe achafanirwa kugadzira bhukimaki iyo inosanganisira parameter yekukumbira mu URL. Kutevera izvi, vanogona kuishandisa kuti vasvike pawebsite uye havazooni chero zvakakoshesa zvekugadzirwa kwemashamba. Uyezve, kuwedzera cookie kune code ndeyekuchenjera, kana kushandisa nzvimbo yekuchengetedza kuti uite miedzo sezvo ichichengetedza zvido zvose zvakasikwa. Nenzira iyi, munhu haafaniri kuita chirongwa chekuisa mamiriro ezvinhu akavakirwa. Kuti uwane ikhoji yakazara, enda pawww.tjvantoll.com uye tsvaga kuti ungabvisa sei kushanya kwako kubva pakuvandudzwa nekugadzirwa kwewebsite.
Panewo zvakare sarudzo yekubatanidza maitiro ose apo zvisarudzo zvisingabatanidzi ndezvenharaunda dzese dzenharaunda uye mamwe mapeji ayo ane analytics yavo.